Gudiga joogtada ah Iyo booliskuba Arinta xildhibaanka sharciga way baal mareen | Qaran News
Gudiga joogtada ah Iyo booliskuba Arinta xildhibaanka sharciga way baal mareen
Writen by Qaran News | 4:44 pm 12th May, 2019
Marka hore ilaahay bisha ramadaan khayrkeeda ha ina siiyo. Waxaan dhagaystay goaanka ay soo saareen golaha wakiilada somaliland maanta 12kii bisha may 2019 ee ku sii daynayaan qabashada xildhibaanka falaagoobay ee dhakool. Gudida golaha wakiiladu waxay soo qaateen qodobka 49 ee dastuurka qaranka somaliland. Qodobku wuxuu ka kooban yahay todoba farqadood. Maaha in aad kala dhex baxdo waxa dooda oo keliya toosinaya ee inaad daristo farqad kasta oo qodobkaa ku jirta.
FARQADA 1aad xubin golaha wakiilada loo qaban maayo waxna loogu qaadi maayo arrin uu ogaaday ama uu golaha soo hordhigay ama arimo rayi uu ka dhiibtay.
Dhakool ma wuxuu golaha hor keenay 18 may waa maalin madaw mana aqoonsani oo rayi ka dhiibtay kadibna shir jaraaid buu qabtay. Mise shir jaraaid oo xayndaabka somaliland ka baxsan ayuu qabtay oo aan golaha iyo somaliland midna khusayn. gudida joogtadu kama jawaabin laakiin waan ka sugaynaa.
Anigu waxaan rumaysnahay wuxuu golaha dhex fadhiyi karaa marka goluhu ku raacsan yahay waxa dhakool aminsan yahay ee uu ka hadlay.
FARQADA 2aad waxaa ka reeban xukunkaas faqrada kowaad wixii cay ama aflagaado ah ee xubintu gaysato.
Dhakool aflagaado iyo wax ka xun ma gaystay.
FARQADA 3aad ma banaana in laga qaado xubinta golaha talaabo baadhitaan ama waraysi ama qabasho ama xidhitaan ama talaabo kale oo ciqaab la xidhiidha iyadoo ogolaasho helo golaha wakiilada mooyaane.
GARQADA afraad waxa xubinta talaabo laga qaafi karaa hadii lagu qabto isagoo dambi faraha kula jira. Markaana waxa waajib ah in golaha si degdeg ah loo ogaysiiyo.
Markii ciidamada amaanku qabteen waxaa waajib ku ahaa inay golaha markkiba ogaysiiyaan.
FARQADA 5aad golaha waxa ku waajib ah inuu hubiyo in talaabada laga qaaday xubintu ay tahay mid toosan.
Maanta gudida joogtadu way badheen hadalkii dhakool ee ahaa 18ka may waa maalin madaw oo beelo la xasuuqay. Waxayna ogoladeen inuu golaha ku jiro oo xasaanada loo daayo. Wax talaabo ah oo ay ka qaadeena ma jirto
FARQADA 6aad hadii goluhu aanu fadhiyin waxa waajib ah in ogolaashaha talaabada laga qaadayo xubinta laga helo gudida joogtada ah ee golaha wakiilada. Golaha waxa la soo hordhigayaa kal fadhiga xiga
Dhakool ma aminsana somiland ma aminsana maalinta xuska 18ka may . Wuxuu ku tilmaamay maalin madaw. Maalin reer gaar ahi leeyahay. Ma sii fadhiyi kara golaha qaranka somaliland leedahay.
FARQADA 7aad dacwAdaha aan ciqaabta ahayn waa lagu oogi karaa.
Golaha wakiilada somaliland waxa igmaday muwaadiiniinta reer somaliland ee aaminsan maalinta qaranka somaliland 18ka may. Dhakool oo aminsan inay maalin madaw tahay in maalin xasuuq tahay, in maalinta dhulka la xaadho tahay ayaa gudida joogtada ah ee golaha wakiilada iyo baashe oo adeer u ah dhakool ogolaadeen inuu xasaanadii loo daayo. Iyagoon wax talaabo ah ka qaadin falkii xumaa ee uu ku kacay dhakool.